Dagaal Khasaare kala duwan geystey Oo ka dhacay Gobolka Hiiraan — CAASIMADA
Home Uncategorized Dagaal Khasaare kala duwan geystey Oo ka dhacay Gobolka Hiiraan
Dagaal Khasaare kala duwan geystey Oo ka dhacay Gobolka Hiiraan
Jalalaqsi (CaasimadaTimes)-Wararka laan ka helayno degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeyay Ciidamada Dowladda & kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo Ururka Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa waxaa sababey kadib markii xalay ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen Xarumo Ciidamada Dowladda & kuwa Jabuuti oo ka tirsan AMISOM ku leeyihiin degmada Jalalaqsi,waxaana Goobjoogayal ay sheegeen in dagaal xoogan uu halkaasi ka dhacay.
Saraakiil ka tirsan Ciidamada dowladda ee degmada Jalalaqsi ayaa waxaa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca Ururka Al-Shabaab,sidoo kalena ay khasaaro ku gaarsiiyeen.
Dhinaca kale wararka kale ee laga helayo Degmada jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Ciidamada Dowlada iyo kuwa AMISOM ay howlgallo ka bilaabaeen Degmada jalalalaqsi Xaafadaha ay ka kooban tahay iyo Deegaanada kale ee hoos yimaado degmadaas.
Si kastaba dagaalkaan ka dhacay degmada Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan weli kama hadlin maamulka degmadaas iyo Ururka Al-Shabaab,hayeeshee xaaladu ay tahay mid degan marka laga reebo howlgallada ay wadaan Ciidamada Dowladda & kuwa AMISOM.
Nagu xirnow si aad u hesho warar kale oo dheeraad ah
Previous articleDEGDEG:Gudoomiye Mursal Oo guryo qasriya iyo dhulal waaweyn ka iibsadey dalka Turkiga. Xageese lacagtu ka timi?
Next articleKhayre iyo Ahlusunna Khilaaf koodi oo la xalin wayey khayre Oo cadaado u guuraya.Maxaa sababey?
Gudoomiye Yariisoow Oo mari doono qaliin aad u halis badan...
Guddiga dib u heshiisiinta Galmudug oo gaaray Cadaado.